Jean Paul a, nahoana no... ary nahoana no...? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
1- Miarahaba anao. Araka ny vaovao nampitaina teny amin’ny tambazotra fesiboky dia namoaka boky ianao. Alohan’ny hiresahana ny votoatiny dia ambarao anay ny nanosika anao hanoratra satria olon’ny radio sy tele izany hoe feo ihany na feo sy sary miaraka no tena nahafantarana anao.
Miarahaba ny mpiserasera www.lakroa.mg. Ny taranja siantifika no tena nanavanana ahy tany ampianarana. Nahatonga ahy ho série C izany. Tsy tao an’eritreritra ny ho mpanao gazety tamin'izany fotoana izany. Fa izay tokoa angaha ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitr'olombelona. Nikasa ho injeniera kanefa lasa mpanao gazety. Na ny mpampianatra ahy sy ny mpiara-nianatra aza gaga daholo hoe lasa mpanao Gazety Jean Paul ? Efa 30 taona izao no naha mpanao gazety ahy. Marobe ny zava-niseho tao anatin'izay 30 taona naha mpanao gazety ahy izay. Nipetraka ny fanontaniana « Ahoana ny fomba hizarana ireo natrehina sy naha vavolombelon’ny zava-niseho ireo ? » Valiny : « Aleo ho soratana ho hitan'ny taranaka mifandimby fa misy lesona maro azo tsoahina ».
2- Nahoana no tsy documentaire sur dvd no lova napetrakao ?
Rehefa nandinika lalina aho momba ny boky, dia efa nieritreritra koa hoe hampiarahako amina feo (élément sonore), satria manana tahiry momba izany aho. Izany hoe : boky miaraka amin'ny CD no natao. Afaka miaina bebe kokoa ny zava-misy izay mamaky boky ka afaka mihaino ihany koa ny feo. Raha izay anefa azo antoka fa ho lafo kokoa ny vidiny vokatra. Ny fahefa-mividin'ny Malagasy anefa iaraha-mahalala. Izay no antony tsy nanaovana azy ho CD na DVD. Azo natao koa ny nanao izany soratra izany anaty CD na DVD... Fa hatramin'izay ho ahy manokana mbola hafa mihitsy ilay mandray boky mitondra azy amin'izay toerana tiana hamakiana azy.
3- Raha hiverenana ny momba ilay boky. Inona no lohatenin’ity boky nosoratanao ity ?
"Dans les Revers du journalisme Malgache : le parcours d'un militant" io no lohatenin’ny boky.
4- « Mba tena hisy marina ny fahalalahan’ny fanaovan-gazety » hoy ianao eo amin’ny fonon-boky. Avy hatrany dia ny code de la communication no mby antsaina. Soritana fa talohan’ny nahalany ny fehezan-dalana momba ny serasera ny nanoratanao ny boky. Inona no tolo-kevitra arosonao ato anaty boky araka ny traikefa niainanao ny asa fanaovan-gazety tanatin’ny 30 taona ?
Rehefa avy niasa tany amin'ny faritra avaratry ny Nosy aho tamin'ny taona nanomboka tamin'ny taona 1987 solotenan'ny Lakroa sy niasa tao amin'ny Gazety ISIKA MIANAKAVY manokana ho an'ny diôsezin'Ambanja, tsaroako foana ny tenin'i Mompera Rémi Ralibera hoe : ...olona sahy ny mpanao gazety, tsy matahotra na iza na iza saingy miasa ao anatin'ny fahamendrehana sy fahatoniana ary tsy maintsy manana fitsipi-pifehezana ao anatin'ny fanajàna ny hafa amin'ny fampitam-baovao"...Hatramin'izay ka hatramin'izao aho tsy nisaina afa-tsy io teniny io rehefa manao ny asa fanaovan-gazety. 30 taona aty aoriana, ho an'izay maheno ny vaovao nataoko na tamin'ny Radio, na tamin'ny Televiziona na tamin'ny gazety an-tsoratra, mety nahatsikaritra fa mahitsy fiteny, kanefa tsy mba nanana olana tamin'ny fifandraisana tamina manam-pahefana na mpitondra na mpanohitra. Raha tsy hoe tany amin'ny taona 2008 nitondran'ny Filoha Marc Ravalomanana. Nibaribary tamin'ireny fa tsy dia tena nahatanty ny filazàna ny marina izy. Niteraka olana matetika tamin'ny vaovaonay tao amin'ny Radio Don Bosco. Tsy nisy afa-tsy ny fitaterana ny zava-nisy anefa no natao tamin'izany. Ary raha nampiteny mpanohitra dia mpanohitra sahy koa tamin'ireny fotoana ireny... Zava-dehibe tamiko izay hafatr'i Mompera Ralibera izay. Tsy nieritreretako mihitsy lalàna hiarovana na hampiharina amiko teo am-panatontosàna an'ity ASA MASINA ity.
5.- Raha mijery ny fonom-boky dia mampiasa teny frantsay sy teny malagasy ianao. Nosoratana amin’ny teny malagasy sy frantsay ve ny boky ? Sa boky roa samy hafa ?
Boky iray ihany ka. Fa tiako ampitaina amin'ny vahiny mahay teny Frantsay koa ny voarakitra ao anatiny. Nandinika ny hatao lohateny aho hatramin'ny loko hamoahana azy, dia niafara tamin'ireo. Raha sendra mahita ilay lohateny amin'ny teny frantsay ny olona maha teny frantsay, dia liana amin'ilay boky, ka na teny malagasy aza no ao tsy maintsy hitady ny amin'ny teny frantsay izy, raha tsy hoe mahay teny malagasy angaha. Ny malagasy moa vao mahita ireo soratra eo ambany amin'ny teny malagasy dia efa mahazo antoka fa amin'ny teny malagasy ny ao anatiny ao. Dia boky iray ihany ireo. Saingy ny amin'ny teny frantsay dia nosafidiana hamidy ivelan'i Madagasikara.
Tena boky iray ihany io havoakako io saingy misy amin'ny teny Malagasy dia misy amin'ny teny Frantsay.
6- Ary ny mikasika ny loko nambaranao kosa ahoana ny amin’izany ?
Ny loko voloparasy no nofinidiko. Io loko dia manambara zavatra maro fa amin’ny teny frantsay no ilazako azy. « Cette couleur symbolise la subtilité, le mystère, le romantisme, la protection et mélancolie et symbolise aussi la fraîcheur, la pureté la paix ». Ireo zavatra rehetra io izay fonoson’io loko io no antony nifidianako ny loko voloparasy fa tena mahalaza ny zavatra iainana ao anatin'ny fanatontosàna ny asa fanaovan-gazety izy io.
7- Efa azo jifaina ve io boky io dia aiza ?
Tsy mbola azo jifaina ka. Andrasana ny fahatongavany avy any ivelany ka tany Doubaï no natonta.
8- Rahoviana kosa no vinavinaina ho tonga eto ny sanganasa ?
Sarotra ny haminavina. Mandefa sambo, mety ho roa volana ? Na latsak'izay, fa mety hihoatra koa aza hahaha… (Ttf. mitokelaka kely ny vahiny eto).
9- Nahoana no any ivelany no natonta ny boky ?
Raha ny faniriana dia teto Madagasikara ihany no natonta ny boky. Saingy malahelo aho milaza eto fa tena sarotra ny mamoaka boky eto Madagasikara indrindra ka boky mirakitra fijoroana vavolombelona tamina tranga ara-politika nisy teto amin'ny firenena. Dimy tamin'ireo mpanonta boky no nantoniko fa manahirana. Sarotra izay ny teny mahalaza azy... Sari-tahotra ny Malagasy.
10- Ankoatra io lafiny sari-tahotra io. Tena lafo ve raha teto no natonta ny boky hamidy teto ary tany ivelany kosa izay hamidy any ivelany ?
Raha ampitahaina, ny manonta boky eto aza no hahazoana kokoa. Ny fomba fiasan'ny mpanonta boky (imprimerie) moa arakaraky ny hanontana maro no mampihena ny vidiny...Ary ny any ivelany ny hany tombony dia ny hatsaràn'ny kalitao. Ny any ivelany saika Malagasy monina avy ampitan-dranomasina (namana, na naman'ireo namana vahiny na malagasy) no fantatro tena nanjifa azy. Ary efa tapitra.
11- Niara-niasa tamin’ny RDB ianao. Hiverenana kely ilay fanontana boky any ivelany. Toa betsaka ny boky ampiasaina eto Madagasikara natonta tany Italia, koa nahoana no tsy tany no natonta ny boky.
Misy namako nanorim-ponenana any Doubaï dia izy no nanolo-tena hoe ndao atao any hoy izy fa mora ny any kanefa tsara ihany koa. Tsoriko ihany fa tsy tao an-tsaiko ny hanao azy tany Italie, tsy fantatro inona no antony fa tsy nirona tamin'izay fotsiny ny saiko.
12- Mbola hisy ny fotoana hiresahantsika ny votoatin’ny boky rehefa tonga izy io. Ka ny fanontaniana farany anio dia ny hoe natolotrao an’iza ny boky (dédicace) ary iza no nanoratra ny préface sy ny hafa raha misy ao ?
Ny boky dia natolotro ho an'ireo namana tao anatin'izay 30 taona naha mpanao gazety ahy izay... Ny Filoha teo aloha Profesora Zafy Albert no nanao ny préface. Izy no Raiben'ny Demokrasia eto Madagasikara. Tamin'ny fotoana nitondrany no nitsoaka teto amin'ity Nosy ity ny rivotry ny Demokrasia, niantomboka tamin'ny Radio Feon'ny Vahoaka na RFV, niafara amin'izao gazety maro sy haino aman-jery marobe ankehitriny izao
13- Misaotra anao fa dia mirary tsy ho azo tsampona ny dian’ireo boky ireo. Liana sahady hamaky azy. Koa mifanao fotoana amin’izay indray ary isika.
Misaotra indrindra ny Lakroa.